Form 189 IQY Apprentice & Trainee Program
(IQY Technical and Vocational Training)
http://www.iqytechnicalcollege.com/Form 189 IQY Apprentice & Trainee Program.htm
http://www.iqytechnicalcollege.com/Form 189 IQY Apprentice & Trainee Program.pdf
အမှန်တကယ်စိတ်အားထက်သန်ပြီးစေတနာရှိသူတို့ကိုမိမိတို့၏လုပ်ငန်းများတွင်စိတ်ကြိုက်ပုံစံဖြင့်လေ့ကျင့်တာဝန်ပေးလိုသောအလုပ်ရှင်တို့သည် IQY Teachnical College ၏ အလုပ်သင်အင်ဂျင်နီယာ၊ အလုပ်သင်စီမံရေးဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သင်ကွန်ပျူတာဝန်ထမ်းများ ရှာဖွေ၊ခန့်အပ်၊ လေ့ ကျင့်ရေး အစီအစဥ်တွင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
IQY Technical and Vocational Training သည်ဆယ်တန်းအောင်နှင့် THS ဆင်းများကိုစုစည်းပေးခြင်း၊
ခန့်အပ်သောဝန်ထမ်းကို Engineering/ Management/ Information Technology Work Studies
ဆိုင်ရာ ညပိုင်း၊Sunday ၊ Offline Video Lesson၊ Online မှသင်သည့် Diploma/ Advanced Diploma/ BE/BTech/ BMgt (Bachelor of Management)/ BAppSc(IT) (Bachelor of Applied Science-Information Technology/ BWS (Bachelor of Work Studies) သင်တန်းများကို၀န်ထမ်းကိုပေးမည့် လစာမှအရစ်ကျကျောင်းလခကိုအလုပ်ရှင်မှနှုတ်ယူကာ IQY Technical College သို့တိုက်ရိုက် ဘဏ်သို့ ငွေသွင်းစံနစ်ဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည်။
The employers who want to recruit the trainees and apprentices in engineering/ information technology/ management and work studies can fill this form to register with IQY Technical and Vocational Training Service.
Employers should be aware of the fact that IQY is not an employment agency which will take overall responsibilities of the trainee staff. We provide the training in theoretical aspect and we can not take the responsibility of the staff regarding their conduct.
Zawgyi One—See Photo
Job Website (အလုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်)
Engineering Jobs အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အလုပ်အကိုင်
ကျေးလက်ဒေသအလုပ်များ (Rural Jobs)
IQY Technical College Facebook Page